Puntland oo ka digtay dabeylo ku wajahan deegaanada maamulkaasi | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Puntland oo ka digtay dabeylo ku wajahan deegaanada maamulkaasi
Puntland oo ka digtay dabeylo ku wajahan deegaanada maamulkaasi
Farriin digniin ah oo ka soo baxday Wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo Isbadalka cimilada dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu sheegay todobaadkan la saadaalinayo roobab mahiigaan ah oo ka da’aya gobollada Bari iyo Sanaag, islamarkaana ay ka dhalan karaan daadad lixaad leh oo qasaare nafeed iyo mid hantiyeedba gaysan kara.
Wasaaraddu waxay si gaar ah ugu digtay dadka dagan dhulka biya mareenka ah, togagga iyo meelaha hooseeya inay taxadar gaar ah sameeyaan, kana fogaadaan meelaha u nugul halista imaan karta, si ay naftooda iyo hantidooda u badbaadiyaan.
Farriinta digniinta ah ayaa lagu sheegay in aan la sahashan saadaasha dhiillada leh, sidaas darteedna digniinta la gaarsiiyo bulshada gobolladaasi oo dhan, si ay diyaar garow uga sameeyaan xaaladaha la filan karo.
Maqaal horeHanti dhowraha guud ee Qaranka oo ka qeyb galay shir Caalami ah
Maqaal XigaCiidamada Xoogga dalka oo qaraxyo ka soo saaray duleedka degmada Awdheegle
Diiq dilay Sargaal Boolis ah waa dhacdo yaableh.
Xaalada Cabudwaaq oo Caawa kacsan & Ciidamo gaaray halkas
Wasiir warfaafinta KGS oo la Kulmay sawir qaadayaasha Madaxbanaan ee Beydhabo